Karaoke of Seto Ghoda Ye Hai Joda Gokul Raut and Parbati Karki | Karaoke Nepal - Audio Karaoke & Lyrics
Karaoke of Seto Ghoda Ye Hai Joda Gokul Raut and Parbati Karki
Download Free MP3 Karaoke of Seto Ghoda Ye Hai Joda Gokul Raut and Parbati Karki with Full Lyrics and Official Audio Song.
Sing or Download Karaoke of Seto Ghoda Ye Hai Joda Gokul Raut and Parbati Karki
Karaoke Title: Seto Ghoda (सेतो घोडा…)
Singer(s): Gokul Raut and Parbati Karki
Lyrics/Music: Gokul Raut
Music Arranger: Purna Gurung
केटा: राम्रो पनि यहै जोडा लाखौँमा एकवटा, को छ होला म जस्तो राम्रो त;
राम्रो पनि यहै जोडा लाखौँमा एकवटा, को छ होला म जस्तो राम्रो त;
सेतो घोडा यहै जोडा ओ कुरा छोड, मै पनि नि त कम्ती त काँ हो र ।
केटी: उमेर बैँस यहै जोर चढ्दै छ मन्द, मै पनि त कम छैन कोई भन्दा;
उमेर बैँस यहै जोर चढ्दै छ मन्द, मै पनि त कम छैन कोई भन्दा ।
केटा: हिड्दै थिए यहै जोडा बाटोमा बाकुले, ह्याकुम ह्याकुम मै चले ह्यान्समले;
हिड्दै थिए यहै जोडा बाटोमा बाकुले, ह्याकुम ह्याकुम मै चले ह्यान्समले;
केटी: लेख्छन् यहाँ यहै जोडा दिनका काट्ने गित, मैलाई हेर्दै कविले कविता;
लेख्छन् यहाँ यहै जोडा दिनका काट्ने गित, मैलाई हेर्दै कविले कविता;
केटा: स्वाको मलाई यहै जोडा लाको र खाको, मन पराउँछन् नजरले हिर्काको;
स्वाको मलाई यहै जोडा लाको र खाको, मन पराउँछन् नजरले हिर्काको;
केटी: वरपर यहै जोडा देख्ने साक्षि छन्, मैलाई हेर्दै घुटुक्क थुक निल्छन्;
वरपर यहै जोडा देख्ने साक्षि छन्, मैलाई हेर्दै घुटुक्क थुक निल्छन्;
केटा: छोरो होस् त यहै जोडा मैजस्तो होस् रे, उदाहरण दिन्छन् रे गाउँकाले;
छोरो होस् त यहै जोडा मैजस्तो होस् रे, उदाहरण दिन्छन् रे गाउँकाले;
केटी: कति लोभले यहै जोडा भुतुक्कै मरे, ओँठको लाली कतिले रिस गरे;
कति लोभले यहै जोडा भुतुक्कै मरे, ओँठको लाली कतिले रिस गरे;
केटा: बोली सके यहै जोडा भन्छन् के भा'को, बोली हो कि गोली हो मोराको;
बोली सके यहै जोडा भन्छन् के भा'को, बोली हो कि गोली हो मोराको;
केटी: अचम्ममा यहै जोडा पर्या छु आफै, राम्री पनि के साह्रै राम्री मै;
अचम्ममा यहै जोडा पर्या छु आफै, राम्री पनि के साह्रै राम्री मै;
केटा: मैले जे जे यहै जोडा गरेनी राम्रो, माटो छोए सुन हुने हात हाम्रो;
मैले जे जे यहै जोडा गरेनी राम्रो, माटो छोए सुन हुने हात हाम्रो;
केटी: मै मोरीले यहै जोडा संरक्षण पाको, बयान गरि साध्य नै नभाको;
मै मोरीले यहै जोडा संरक्षण पाको, बयान गरि साध्य नै नभाको;
केटा: मन चङ्गा झै यहै जोडा कुबेरझैँ धनमानी, मेरो भाग्यो कुलमैभो जन्मनी;
मन चङ्गा झै यहै जोडा कुबेरझैँ धनमानी, मेरो भाग्यो कुलमैभो जन्मनी;
केटी: हाम्रो नि झन् यहै जोडा एक राज्य चलाको, जीम्बल बाको नामैले कहलाको;
हाम्रो नि झन् यहै जोडा एक राज्य चलाको, जीम्बल बाको नामैले कहलाको;
केटा: महादेवझैँ यहै जोडा सत्यमा छ भन्छन्, यो कलिको कृष्ण होस् तँ भन्छन्;
महादेवझैँ यहै जोडा सत्यमा छ भन्छन्, यो कलिको कृष्ण होस् तँ भन्छन्;
केटी: बादलुमा यहै जोडा लुक्छे र आउछे, मलाई हेर्दै चन्द्रमा सर्माउँछे;
बादलुमा यहै जोडा लुक्छे र आउछे, मलाई हेर्दै चन्द्रमा सर्माउँछे;
केटा+केटी: (बाह्रखरी यहै जोडा पढेकै हो हेर, कपुरी क राम्रो म भनेर;
बाह्रखरी यहै जोडा पढेकै हो हेर, कपुरी क राम्रो म भनेर;
सेतो घोडा यहै जोडा ओ कुरा छोड, मै पनि नि त कम्ती त काँ हो र ।)
केटा: मै पनि नि त कम्ती त काँ हो र…
केटी: मै पनि नि त कम्ती त काँ हो र…
केटा+केटी: मै पनि नि त कम्ती त काँ हो र
[Note: Due to typical ethnic words, we may happen to miss-spell the song lyrics. If you found such mistake please kindly suggest us via contact form or at info@karaoke.com.np.
Karaoke of Seto Ghoda Ye Hai Joda Gokul Raut and Parbati Karki 2019-01-07T18:49:00-08:00 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Karaoke Nepal Official
Ethnic Karaoke Folk Karaoke
Karaoke Nepal - Audio Karaoke & Lyrics: Karaoke of Seto Ghoda Ye Hai Joda Gokul Raut and Parbati Karki